Sadex arrin oo laga bartay kulankii dhexmaray Kheyre iyo guddoomiye MURSAL - Caasimada Online
Home Warar Sadex arrin oo laga bartay kulankii dhexmaray Kheyre iyo guddoomiye MURSAL
Sadex arrin oo laga bartay kulankii dhexmaray Kheyre iyo guddoomiye MURSAL
Muqdisho (Caasimada Online) – Kulan Saacado badan la qaban qaabinaayay balse socday waqti aan badneyd ayaa xalay dhexmaray ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Kulankaasi ayaa u muuqda mid inta badan la isku fahmay waxyaabaha looga wada hadlay, waxaana ugu weynaa xalinta arrimaha siyaasadda iyo xiisadii ka dhalatay mooshinkii laga gudbiyay madaxweynaha.
Kulankaasi ayaa u muuqda mid keenaya isku soo dhawaansho guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda sare ee dalka oo Khilaafkooda uu xoogeystay kadib markii mooshinka uu qabtay guddoomiyaha.
Waxyaabaha laga bartay kulankii Xalay waxaa kamid ah:-
1 – Is aaminaadda la’aanta labada dhinac oo keentay in shaqsi walbaa uu ka baaqsado in ruuxa kale ku booqdo xafiiskiisa, taasi oo dhalisay in meel dhexe la iskuugu yimaado.
2 – In isaga uu yahay ruux isku haya xildhibaanada mooshinka wada balse waxaa caqabad kale ka imaan doontaa marka xildhibaanadii la safnaa Guddoomiye Mursal uu qancin waayo arimaha kulanka, haddii kale ay ka hor imaan karaan.
3 – In kulanka labada masuul uu gogol xaar u ahaa kulan Mursal iyo Farmaajo dhex mari doona.
Xildhibaanada la safnaa guddoomiye Mursal ayaa la xaqiijiyay inaysan ka qeyb galin kulanka, waxaana waxyaabaha la isku soo hadal qaaday kamid ah in Guddoomiye Mursal uu ka guuro halka uu hadda degen yahay.